Jaakadaha / Tartanada clothes Xayeysiinta dharka • xirfadlaha kumbuyuutarka P&M
Jaakadaha iyo jaakadaha xayeysiinta xaqiiqdii waa xulasho wanaagsan xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha. Dharka aan bixinno waxay umuuqdaan kuwo aad uqurux badan, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin cunsurro waxtar leh. Waxay wax ku ool u tahay ka hortagga arrimaha dibadda sida dabaysha iyo roobka.
Jaakadaha iyo jaakadaha aan u adkeysan karin roobka iyo dabeylaha
Googoyntu waxay mudan yihiin fiiro gaar ah roobka diida iyo dabaysha ilaalin, adeegsiga xaaladaha cimilada dibada ee adag. Si loo soo saaro jaakadaha iyo jaakadaha tiknoolajiyada ugu casrisan ayaa loo isticmaalaa, dhamaantood si sheygu ugu adeegi doono sanado badan xaalada ugu fiican iyadoo la ilaalinayo sifooyinkiisa
Noocyo kala duwan oo loogu talagalay raaxada iyo amniga
Inaga dukaan waad heli doontaa jaakadaha iyo kamizelki qaabab kala duwan oo loogu talagalay dumarka, ragga, carruurta iyo unisex. Noocyo kala duwan oo kala duwan iyo midabbo ayaa kuu oggolaanaya inaad alaabooyinka ku hagaajiso baahiyahaaga oo aad u aqoonsatid marka la eego midabada leh midabada shirkadda ama naadiga.
Tani waa xulasho si gaar ah waxtar u leh markaad dalbaneyso dharka xayeysiintaqaasatan hadaan iyada doorano shaqsiyeyn iyadoo lagu fulinayo daabacaad shaqsiyeed.
Waxay ka kooban yihiin koox muhiim ah Jaakadaha milicsiga, hagaajinta nabadgelyada berrinka iyo waddada. Way ku habboon yihiin safarka ka dib mugdiga, iyo sidoo kale maalmo daruuro badan leh.
Bixinta sidoo kale waxaa ku jira jaakad huruud ah, oo ka tarjumeysa carruurta, taas oo hubaal horumarin doonta aragtida iyo nabadgelyada ilmaha ee waddada ama wadada dhinaceeda u dhexeysa guriga iyo dugsiga. Jaakadaha milicsiga ee dadka waaweyn iyo carruurta labadaba waxay gacan ka geysan doontaa yareynta halista shil daran iyadoo ay ugu wacan tahay muuqaalka oo hagaagay.
Waxaan sidoo kale bixinnaa jaakad milicsiga iyadoo ay suurta gal tahay in lakala furo gacmo iyo dabool, taas oo si gaar ah waxtar ugu leh xilliyada kala guurka iyo meel kasta oo shaqadu u baahan tahay isbeddel ku dhaca deegaanka iyo heerkulka. Jaakadu waxay leedahay jaakad dhogorta laga jaro ah oo gudaha ah, shahaado 3M ah oo karbaash ah, oo buuxisa heerarka EN ISO. Badeecada waa la shaqsiyeyn karaa, laakiin sababo fara badan iyo jeebado awgood, aagga calaamadeynta ayaa xaddidan, marin u helidda sumadda ayaa dhabarka ku taal.
Si daabacan ayaa loo daabacay
Qurxinta (daabacaadda kumbuyuutarka lub daabacaadda shaashadda) on jaakadaha iyo jaakadaha waxaa lagu sameeyaa iyadoo la fiirinayo dhammaan faahfaahinta.
Feejignaanta tayada sare waxay ka dhigan tahay in dharka aad iibsato uu noqon doono qayb metelaya xirfadleyda shirkadda. Shirkadeenu waxay leedahay baarkinka mashiinka u gaarka ah, kaas oo noo ogolaanaya inaan si sax ah u xakameyno nidaamka qurxinta marxalad kasta, oo markaa aan si dhaqso leh uga falcelino haddii ay jiraan cilado soo saar.
Markii dalabkii alaabtu ballaadhiyey iyo baahida macaamiisha, waxaannu go'aan ku gaadhnay in aannu qurxinno iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan, ugu horreyntii daabacaadda kumbuyuutarkalaakiin sidoo kale daabacaadda shaashadda, sublimation i wareejinta kuleylka.
Waxaan kugu martiqaadeynaa qiimeyn dhaqso ah oo bilaash ah.
jaakadaha shaqada diiranjaakadaha shaqada dumarkaJaakadaha shaqada raggaJaakadaha shaqada ee dahaarka ahJaakadaha shaqada ee dahaaranJaakadaha shaqada ee dahaarka ahJaakadaha shaqada ka tarjumayajaakadaha shaqadajaakadaha shaqada AllegroJaakadaha shaqada xagaagaJaakadaha shaqada ee dahaaranJaakadaha shaqada ka tarjumayajaakadaha shaqada olxJaakadaha shaqada ku daabacJaakadaha shaqada xilliga qaboobahajaakadaha shaqada raggajaakadaha shaqeeya jiilaalkajaakadaha shaqada dahaaranjaakadaha shaqada ka tarjumayajaakadaha shaqada milicsiga Allegrojaakadaha roobka raggashaqee koodhadhka roobkajaakadaha shaqadaJaakadaha shaqada ee Allegrojaakadaha shaqada cadjaakadaha shaqada haweenkajaakadaha shaqada ee cabirka lagu darojaakadaha shaqada raggajaakadaha shaqada jiilaalkajaakadaha shaqada ee aan ololi karinjaakadaha shaqada dahaaranjaakadaha shaqada ka tarjumayaJaakadaha shaqada jiilaalkajaakadaha shaqada olxJaakadaha shaqada ee roobka celiyajaakadaha shaqada ee kuleylka lehjaakadaha shaqada gugajaakadaha shaqada ku daabacanjaakadaha ka shaqeeya oo leh muraayadjaakadaha shaqada jiilaalkaJaakadaha shaqada xilliga qaboobahajaakadaha shaqada ee xilliga qaboobahaJaakadaha shaqada jiilaalkajaakadaha shaqada ee xilliga qaboobaha AllegroJaakadaha shaqada ee xilliga qaboobahadukaanka jaakadaha shaqada jiilaalkajaakadaha jiilaalka raggaJaakadaha shaqada ee milicsiga ahjaakadaha qaboobahajaakadaha jiilaalka milicsigajaakadaha shaqada dabacsanjaakadaha shaqada ku suntanjaakadaha shaqada mascotjaakadaha shaqada ee norwayjaakadaha shaqada ka tarjumayajaakadaha shaqadajaakadaha shaqada dahaaranjaakadaha qaboobahaJaakadaha dharka shaqadajaakadaha shaqada jiilaalka